ပြိုင်ဘက်မရှိ: Kartrider Rush + သည်လ၏အကောင်းဆုံးဂိမ်းဖြစ်သည် Androidsis
[ဗွီဒီယို] ဇွန်လအတွက်အကောင်းဆုံး Androidsis ဂိမ်း - Kartrider Rush +
လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Kartrider Rush + ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် ၎င်းသည်ဇွန်လအတွက်အကောင်းဆုံး Androidsis ဂိမ်းအတွက်ဆုကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည့်အတိုင်း Mario Kart Tour ၏ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာသည်။
တစ် ဦး ကအလွန်အထူးဂိမ်း ၎င်း၏အကြီးအ multiplayer အစိတ်အပိုင်းသည် နှင့်အဓိကအားဖြင့်ဒီရှုထောင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြောင်း, အလွန်ကောင်းမွန်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါသောဂိမ်းမတိုင်မီဖျော်ဖြေမှုမရှိခြင်းဘယ်တော့မှရှိမည်မဟုတ်သည့်အတွက်၎င်းတွင်ပုံပြင်နှင့်အခြားများစွာသောအရာများပါ ၀ င်သည်။
လ၏ Androidsis ဂိမ်း: Kartrider Rush +
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုဤဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပါက၎င်းသည်သီလတစ်ခုလုံးကိုတန်ဖိုးထားရန်ဖြစ်သည် Mario Kart Tour ပြိုင်ဘက်; ကြောင်းလမ်းဖြင့်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်စကား လအနည်းငယ်အကြာကအွန်လိုင်း multiplayer နှင့်အတူ update လုပ်ခဲ့သည်, Kartrider Rush + ၏အတောက်ပ output ကိုအများကြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလုပ်ပေးသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အ Kartrider Rush + ပွဲသည်အခြားကစားသမားများနှင့်ယှဉ်လျှင်အချိန်ပိုဖြစ်သည်, ဒါကြောင့်ပျော်စရာစိတ်ချပါထက်ပိုပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အားအထင်ရှားဆုံးသောအလှဆင်မှုများမှတစ်ဆင့်စီးဆင်းမည့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်ထိုတိုက်နယ်များကိုလည်းမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ Nintendo ၏ဂိမ်းတွင်ထူးခြားသောအချက်တစ်ခုမှာအသေးစိတ်နှင့်ကောင်းစွာစဉ်းစားထားသောအဆင့်များဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်မှန်ကန်စွာရရှိရမည်ကိုသူတို့သဘောပေါက်နားလည်ခဲ့ကြသည်။
ဂိမ်းထဲမှာ ငါတို့ကဲ့သို့သောတာဘိုကဲ့သို့သောကွဲပြားသောကျွမ်းကျင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည်။ Kartrider Rush + မှာသင်စောင့်နေတဲ့ဆားကစ်တွေရဲ့အမြန်နှုန်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကိုင်တွယ်နိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးသားလမ်းဖြင့်ဖြစ်သည် ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာကဒီအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်သန်းသွားတယ်.
ငါတို့နေခဲ့ ထို့အပြင်သူတို့၏ဇာတ်ကောင်များ၏အသေးစိတ်နှင့်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူ karts ၏လိုပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအမြန်နှုန်းများယူဆောင်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောကာတွန်းဂိမ်းတွင်စနစ်တကျဆက်လက်တိုးတက်စေရန်အသစ်များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထိုသို့အလွန်ရှင်းပါတယ် ဒါဟာသူတို့စနစ်တကျ update လုပ်မယ့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ် အသွင်အပြင်အသစ်များ၊ ဆားကစ်အသစ်များ၊ ကားများနှင့်ဇာတ်ကောင်များကိုပိုမိုစောင့်ဆိုင်းနေသည့်တက်ကြွသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအမြဲတမ်းရှိရန်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပေးရန်။
ထိုကွောငျ့ Kartrider Rush + သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လအတွက်ဂိမ်းဖြစ်သည် သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူပျော်မွေ့ရန် စကားမစပ်, ငါတို့ Androidsis YouTube channel အပြင်ငါတို့နှင့်အတူလိုက်ပါသောဗီဒီယိုကိုမလွတ်ပါစေနှင့် မနေ့ကဇွန်လ၏အများဆုံး COOL ဂိမ်း.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » [ဗွီဒီယို] ဇွန်လအတွက်အကောင်းဆုံး Androidsis ဂိမ်း - Kartrider Rush +
သင်၏မိုဘိုင်းမှ Alexa အတွက် Google Assistant ကိုဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
Xiaomi Mi Band5၏တရားဝင်စျေးနှုန်းကိုစစ်ထုတ်ခဲ့သည်